Half height 1 steel door cabinet with2adjustable shelves and graphic available. စတီးတံခါးနှင့် ဗီရိုအသေးဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင် (၂)စင်ပါဝင်ပြီး ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့်လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
Half height 1 glass door cabinet with2adjustable shelves. မှန်တံခါးနှင့် ဗီရိုအသေးဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင် (၂)စင်ပါဝင်သည်။
Height open 1 door cupboard with5adjustable shelves and graphic available. တစ်ဖက်ဖွင့်စတီးတံခါးနှင့် ဗီရိုဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင်(၅)စင်ပါဝင်ပြီး၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Full height open steel door wardrobe with 1 hanging rod and 1 shelf. (including base) စတီးတံခါးနှင့် အ၀တ်အစားဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် စင် (၁)စင်ပါဝင်သည်။ (အောက်ခြေစင်ပါဝင်သည်။)
Full height open glass door wardrobe with 1 hanging rod and 1 shelf. (including base) မှန်တံခါးနှင့် အ၀တ်အစားဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် စင် (၁)စင်ပါဝင်သည်။ (အောက်ခြေပါဝင်သည်။
2 DOOR HALF HEIGHT,2SHELVES
Half height steel door cabinet with2adjustable shelves and graphic available. စတီးတံခါးနှင့် အ၀တ်အစားဗီရိုအလတ်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် စင် (၁)စင်ပါဝင်သည်။
2 Door cabinet with2adjustable shelves and keylock. ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် စင်(၂)စင်နှင့် သော့ခတ်နိုင်သည့် နှစ်ဖက်ဖွင့်တံခါးဗီရို။ Size: W88*D40.7*H88 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၈၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၈၈ စင်တီမီတာ
Free standing pedestal with3drawers and central lock. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါသည့် အံဆွဲ (၃)ခုနှင့်တိုင်ခုံ။ Size: W38.8*D56*H72.2 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၃၈.၈၊ အနံ ၅၆၊ အမြင့် ၇၂.၂ စင်တီမီတာ
BE-035 Cushy Steel Bed 3.5fts BE-035 ဇိမ်ခံ...
BE-035 Cushy Steel Bed 3.5fts Size (W*L*H) : 115*214*103 cms
BE-060 Cushy Steel Bed 6fts BE-060 ဇိမ်ခံ စတီးခေါက်ကုတင်...
BE-060 Cushy Steel Bed 6fts Size (W*L*H) : 191*214*103 cms